Testimonial – Sonic Generation
5 Stars Forex သင်တန်းအများကြီးတက်ဖူးတယ် ဒီသင်တန်းက တကယ်ကိုရိုးရှင်းပြီး Strategy ကိုကောင်းမွန်စွာအသုံးချတတ်အောင်လမ်းပြပေးတယ် Risk & Reward Management ကို နားလည်ခဲ့တယ် Basic++ & Professional Course နှစ်ခုလုံးတက်ဖြစ်လိုက်လို့ ကိုယ့်ကိုကိုယ် ယုံကြည်မှုပိုရှိလာတယ် ေက်းဇူးပါ Sir KO THANT
Kyi Chan Business Owner
စေတနာပါပါနဲ့ တစ်ဦးချင်းလိုအပ်ချက်တွေကိုမြင်သိပြု ပြင်ပေးမှု့ ကိုယ်တိုင်စည်းကမ်းထိန်းသိမ်းနိုင်စေမှု့ အစုအဖွဲ့စနစ်တကျပေါင်းစည်းစေမှု့ စည်းကမ်းစိတ်နေစိတ်ထား စနစ်တကျဈေးကွက်ချဉ်းကပ်ပုံ စနစ်တကျအနိုင်ယူမှု့ စနစ်တကျအရှုံးခံမှု့ မဟာဗျူဟာမြောက် နည်းဗျူဟာမြောက် စည်းစနစ်တကျ လေ့ကျင့်သင်ကြားပေးတဲ့အတွက် မိမိအနေဖြင့်အထူးကျေးဇူးတင်ရှိပါကြောင်းနှင့် ကမ္ဘာ့ဈေးကွက်အတွင်းအောင်မြင်သော မြန်မာTraderများများပေါ်ထွက်လာစေရန်မွေးထုတ်သောသင်တန်းဖြစ်လာစေရန်ဆုမွန်ကောင်းတောင်းအပ်ပါတယ် "FOREX ဈေးကွက် တွင် စည်းကမ်းတကျအောင်မြင်သော Trader တစ်ယောက်အဖြစ်ရပ်တည်လိုသူများ မဖြစ်မနေတက်ရောက်သင့်သောသင်တန်းတစ်ခုဖြစ်ပါကြောင်းထောက်ခံအကြံပြုတိုက်တွန်းအပ်ပါတယ်" ဆရာကိုသန့်နှင့်တကွ Sonic generation မှ မိတ်ဆွေ များအားလုံးကျန်းမာချမ်းသာကြပါစေ
Khun Ai Pee Business Owner
Forex traderလုပ်မည့်သူတိုင်းတက်ရောက်သင့်တဲ့သင်တန်းလေးပါ အရမ်းကောင်းပါတယ် .
Yandar Khaing Hþæý Hþæý Student
Very good, very nice and very patient teacher ( ko Thant ) who explained very well about forex trading and give us very good technique about how to trade and not to get lose withinafew days. I believed, it isagood start , learning at sonic generation who are interested in forex trading.
Ko Than Zaw Business Owner
forex trading ဆိုတာ ဘာမှမသိတဲ့ကျနော်အတွက် ဒီသင်တန်းဟာ အခြေခံအတွက် ပြီးပြည့်စုံ့ တဲ့သင်တန်းပါခင်ဗျာ ကျေးဇူးတင်ပါတယ် ကိုသန့်ခင်ဗျာ
Tun Win Engineer (Business Owner)
အရင်က Forexကို အလွယ်လေးနဲ့ သူများပြောတဲ့အတိုင်း လုပ်လို့ရမယ်ထင်ခဲ့တယ်။Sonic generation သင်တန်းကို တက်လိုက်တော့မှ Traderရဲ့ လိုက်နာရမယ့် စည်းမျဉ်းတွေနားလည်သွားတယ်။ ကိုယ့်Trading system ဘယ်လိုပုံစံလုပ်ရမယ်ဆိုတာ သိလာတယ်။ စနစ်တကျနဲ့ တစ်ခြားသင်တန်းများနဲ့မတူဘဲ စေတနာများစွာထားပြီး သင်ပြပို့ချပေးတဲ့ ဆရာနဲ့အတူ Sonic generationကို ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်။ ဆရာ သင်ပေးတဲ့အတိုင်း Pro: Trader ဖြစ်အောင် သေချာလုပ်ဆောင်သွားပါမယ်။
Myat Thein Tun Engineer (Business Owner)
Basic အတွက် ရိုးရိုးရှင်းရှင်း ထိထိမိမိနက် သင်ကြားပေးသောဆရာ သန့် ကျေးဇူးပါ
Kaung Khant Zaw Student
SG is the best place to learn about Forex. Ordinary training places only teach how to trade and watch market. Saya Ko Thant showed us the way from the beginning to the end including how to take care of your mental health, physical health, business plan, profit loss chances and alot of things you wouldn't expect fromaforex training. Very caring upon each individual. Im very glad that I found out SG and Ive learnt alot from Saya Ko Thant's lessons and his own experience. I recommend SG and you won't disappoint.
Mg Sai Student
It’sabest place to learn the technical analysis in forex trading. I highly recommended it for beginners.
Aung Chit Moe Stock Trader
Definitely the best place to learn forex trading. At first, I thought the class would be boring but no, I didn't even have the time to be bored! They explain the subject very clearly and if you don't understand something, you can asked to be explain again. Even if you don't know anyingthing and have to start from the very beginning, don't worry. Just believe in Sonic Generation.
Chimmy Chan Student
Ryan Kyawmaw Business Owner
5 star Forex Trading ကိုစတင်လေ့လာမည်ဆိုပါက မဖြစ်မနေတက်သင့်သည့်သင်တန်းဖြစ်ပါတယ် သင်တန်းတွင်ပို့ချသော st rategy များမှာ လက်တွေ့တွင် အမှန်တကယ် အသုံးဝင်ပြီး လိုအပ်သည်များရှိပါက အချိန်မရွေးtrainerများနှင့်ဆက်သွယ်မေးမြန်းနိုင်သောကြောင့်ပို၍recommedပေးပါသည်
Win Min Htun Alloha Travel & Tours
Forex..... ကြားဖူးနားဝရှိတာကြာပေါ့...... ဘာမှန်းမသိညာမှန်းမသိ.....ဟိုလျှောက်လှန် ဒီလျှောက်ဖတ်နဲ့.......အမှန်တိုင်းပြောရင်ဘာမှကို နားမလည်း.....အဲ့တော့......နည်းမှန်လမ်းမှန် သင်ပြတဲ့ သင်တန်းရှာတာပေါ့......သင်တန်းတွေကတော့အများကြီးပေါ့.....စုံစမ်းလေ့လာလိုက်တော့ #Sonic Generation ဆိုတဲ့ သင်တန်း တွေ့ပါလေရော.....သင်တန်းအပ်တယ်ပေါ့......စာတွေ့လက်တွေ့တင်ဘယ်ကမလဲဗျာ.....သင်တာတော့ အကုန်ပဲဗျ.... သင်တန်းတော်တော်များများမှာမမြင်ရတဲ့ အရာ ကျွန်တော် #Sonic Generation မှာတွေ့ရသဗျ.....အဲ့ဒီအရာက "စေတနာ” ဗျ.....ပြီးပြီးရောမဟုတ်ဘူးဗျ....... ထို့ကြောင့် သင်တန်းတက်မယ် တက်ဖို့ စိတ်ကူးမယ် ရွေးမယ်ဆိုရင် #Sonic Generation. ကိုသာရွေးပါလို့...........👌👌👌👌👌👌👌👌👌👌
Chit Ko Ko Oo Company Staff
ကျွန်တော် forex ဆိုတာဘာမှ မသိတဲ့ သူတဦးပါ ဒီသင်တန်းမတက်ခင် အထိ Forex ဆိုတာ လောင်းကစားဆန်တယ် ထင်ခဲ့တာ ဆရာသန့် (Sonic Generation)ရဲ့ ကျွမ်ကျင်တဲ့သင်ကြားမှု နဲ့ စေတနာ ပါတဲ့လမ်းပြမှုတွေကြောင့် Forex ဆိုတာ backup business တခုဖြစ် လုပ်ကိုင်သင့်တယ် ဆိုတာ တိကျပြတ်သားစွာသိ မြင်လာခဲ့ရတယ်
U Than Naing Win Business Owner
Forex & Gold Trading ရဲ့ Theory and Concepts တွေကို သေချာရှင်းလင်း သင်ပြပေးတဲ့အပြင် Risk and Rewards Management ပါ သင်ကြားလေ့ကျင့်ရတယ်... Forex & Gold Trading ကို Second Business တစ်ခုအနေနဲ့ ဘယ်လို လုပ်လို့ရတယ်... Business Concepts, Trading Strategy and Trading Psychology တွေပါ လေ့လာခွင့် ရခဲ့တယ်... သင်တန်းပြီးသွားလဲ Team Work Support အနေနဲ့ ဆရာထံမှ ဆက်လက်လေ့လာခွင့် ရနေတယ်... Forex & Gold Trading ကို လေ့လာမယ်ဆိုရင် ရွေးချယ်ဖို့ အကောင်းဆုံး သင်တန်းပါ...
Aung Ko Myint IT Technician
Forex Trading ကိုစတင်လုပ်တော့မယ်ဆိုရင် တက်ရောက်သင့်တဲ့ သင်တန်းကောင်းတခုပါ သင်တန်းဆရာရဲ့ ပြီးပြီးရောဆိုတဲ့စိတ်နဲ့မဟုတ်ဘဲ ဒီ Trading ကို Business တခုအနေနဲ့ ဘယ်လိုစတင်ရမယ် လုပ်ကိုင်ရမယ် ထားရှိရမယ့် စိတ်နေစိတ်ထား ကအစ စေတနာပါပါနဲ့သင်ကြားပေးခြင်းဖြစ်ပါတယ် လုပ်ငန်းအဆင့်ဆင့်ကိုလဲ အသေးစိတ်မှအစ စနစ်တကျသင်ကြားပြသပေးတာမို့ Forex ကိုစတင်လုပ်ကိုင်စိတ်ဝင်စားမယ်ဆိုရင် တက်ရောက်သင့်ဆုံး သင်တန်းတခုဖြစ်ပါတယ်....
Htin Min Nwe Software Developer
forex tradingကို စပြီးလေ့လာနေတဲ့သူတွေအတွက် တက်ရောက်သင့်တဲ့ သင်တန်းတခုခု စုံစမ်းနေပြီဆို sonic generation ကို တက်ဖို့ အကြံပေးလိုက်ပါတယ် နားလည်သဘောပေါက်လွယ်အောင်လဲ သင်ကြားပေးပါတယ် FXကို လေ့လာဖို့ စဉ်းစားနေပြီဆို SGကို တက်ပါ မိတ်ဆွေတို့အတွက် အမှန်တကယ် အကျိုးရှိစေပါတယ်။
Mingyithar Self Employed
forex beginner များအတွက်ကောင်းမွန်တဲ့ Strategy များစွာရရှိခဲ့ပါတယ်။ စေတနာအပြည့်နဲ့ ရှင်းပြမှုများအတွက် ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ ဆက်လက်ပီး ကြိုးစားလေ့ကျင့်ပါအုံးမယ်ဆရာ။
Kyaw Naing Student
ဆရာ မင်္ဂလာပါ။ ဆရာ့အခုသင်တန်းမှာ အတူတက်ခဲ့ တဲ့ မိတ်ဆွေများရော ဆရာ ရဲ့အဖွဲ့ ညီလေးများရော အားလုံးမင်္ဂလာပါ ခင်ဗျာ။ ကျွန်တော် ဆရာ့သင်တန်းကို တက်ရတာ မိမိကိုမိမိဂုဏ်ယူပါတယ်။Basic အဆင့်သိရတာကို အရမ်းကျေနပ် ပျော်ရွှင်ရပါတယ်။အခုကျွန်တော်ရဲ့ Passion တွေအရမ်းတက်နေပါတယ်။ နောင်လည်း တက်နေမှာပါ။တကယ်ပါ အရင်က ဒီ Forex Trading ကိုတကယ် လုံးဝ မသိခဲ့ပါဘူး။အခု ဆရာ့ကျေးဇူးကြောင့် ဘာလဲဆိုတာ သိခဲ့ရပါပြီ။တကယ်တော့ ဆရာက ငါးကိုပေးတယ်ဆိုတာထက် ငါးမျှားနည်းကိုသင်ပေးတာပါ။ကျွန်တော် အောင်မြင်မှု့စိတ်ဓါတ်တွေမျှဝေ ပေးတဲ့ ဆရာကိုလတ် ကဘာပြောလဲဆိုတော့ အောင်မြင်ချင်ရင် လူတွေကို ပေးကမ်းရမယ်တဲ့။အပေါ်ယံစဉ်းစားရင် ကိုယ့်မှာရှိတာပေးလိုက်မှတော့ ဘယ်လိုလုပ်အောင်မြင်မှာလဲပေါ့။ တကယ်တော့ အဲဒီလိုမဟုတ်ပါဘူး။အဆင့်မြင့်တဲ့နည်းနဲ့ပေးနည်းကိုပြောတာပါ။အဲဒီနည်းက အခု ဆရာ ကျွန်တော်တို့ အခုသင်ပေးတဲ့နည်းပါပဲ။ဒီကမ္ဘာကြီးကစျေးကွက်ထဲကို အမြတ်ရအောင်ရောင်းတတ် ဝ ယ်တတ်ဖို့ ပညာပေးတာ ဘယ်လောက်တောင်းကောင်းလဲ ဆိုတာကတော စဉ်းစားနေ ရင်ဦးနှောက်ခြောက်လိမ့်မယ်။လုပ်ချင်တဲ့စိတ်ကလေးစိတ်ကလေးရှိယုံနဲ့မပြီးပါဘူး။တကယ်လုပ်ဖြစ်အောင်လုပ်ကြပါ။ဒါမှသင်လိုချင်တာ တကယ်ဖြစ်လာမှာပါ။သင်တန်းကြေးဆိုတာကို မမြင်ပါနဲ့။တကယ်တန်ပါတယ်။ဘယ်ဟာမှမမြဲတာမှန်ပေမဲ့ဒီစျေးကွက်ပျောက်ကွယ်သွားဘို့ကတော်တော်မလွယ်တာပါ။ဒါ့ကြောင့် မိမိတသက်တာအတွက်မပြောပလောက်ပါဘူး။ကျွန်တော် ငွေရှိ့လို့ပြောတာမဟုတ်ပါဘူး။ကျွန်တော့်ဘဝတကယ် Struggle ပါ။အောင်မြင်မူှ ဆိုတာ ပေးဆပ်ရမှု့တွေ Experienceတွေ မပါဘဲ အောင်မြင်တာရှားပါတယ်။သင်တန်းအခမ်းအနားကလည်းပြည့်စုံလွန်းလို့ ဆရာတိုကိုအားနာမိပါတယ်။ဆရာNature ကတကယ် ရိုးရှင်းပြီး တကယ်ဖြောင့်မတ်တာပါ။နားမလည်ရင်တောင် တခြားနေရာမှာ စီစဉ်ပြီးရှင်းပြပေးသေးတယ်။ဆရာ့မှာ ရင်းနှီးရတာတွေရှိ့တာပြောချင်တာပါ။အခုခောတ် ဘာလုပ်လုပ် ငွေမပါလို့ မရတာအကုန်သိပါတယ်။ We are Billioner Trader ဖြစ်အောင် အခု Basic class မှာ တက်ခဲ့ တဲ့ Border မိတ်ဆွေများအားလုံး Pro Class မှာ ဆုံတွေ့ကြပါဆို့။ ကျွန်တော့ဘေးက ညီလေး ကိုညာဏ်လင်းထက်ကိုလည်း ကျေးဇူးပါ။ကိုရှိန်းသတိရပါတယ်။Basic မှာ အခက်ခဲတွှေုလည်း မိတ်ဆွေတို့ မစိုးရိမ်ပါနဲ့။ဆရာကိုOnline မှာမေးလို့ရပါတယ်။အခက်အခဲကို ဖြေရှင်းနိုင် ကျော်နိုင်မှ အောင်မြင်မှာပါ။ဆရာပြောတဲ့ ပြေးစက်ပေါ် အပြေးလေ့ကျင့်သလိုမျိုးပဲ ရောက်ခါနီး အားတင်းထားပါ။စာရှည်သွားလို့ကျွန်တော်မှားခဲ့တာရှိ့ရင်ခွင့်လွတ်ပါ။I'm alway honest .ကျွန်တော်ကတော့သမ္မာအာဇီဝကြတဲ့ အလုပ်မို့ တကယ့်ကို လုပ်ချင်တာပါ။လုပ်ကြပါလို့ စေတနာနဲ့ ပြောပါစေ။ All Friend,Let we see PRO CLASS.
Moe Man Hein Self Employed
မဂၤလာပါဆရာ"...... ဆရာအပါဝင် Sonic Generationသင်တန်းမှာပါဝင်တဲ့ ဆရာများအလုံးကို....... အထူးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့ လုံးဝမသိသေး မရင်းနှီးသေးတဲ့ Forex Trading Course နဲ့ ပတ်သက်တာမှန်သမျှ.. ကျွန်တို့ကို ဗဟိုပြုပြီးသင်တဲ့နည်းနဲ့ စိတ်ရှည်ပြီးစေတနာထားသင်ပြပေးမူတွေအတွက် ကျေနပ်အားရမိပါတယ်။ Laptop ဆိုတာကြီးနဲ့ သင်ရမှာဆိုတာ သိလိုက်ရတော့ အမှန်ပဲ အားငယ်မိခဲ့ပါတယ်ဆရာ" ကျွန်တော်တို့ လုံးဝမကျွမ်းကျင်တဲ့အရာမို့ပါ။ Laptop သုံးနည်းကအစ စေတနာထားပြီး သင်ကြားပေးတာကိုက အားဆေးတစ်ခွက် သောက်လိုက်ရသလိုပါပဲ။ Forex Trading ဆိုတာ ၾကားဖူးနားဝပဲရိွခဲ့တာပါ။ သူ့ရဲ့သဘောတရားကို အလောင်းစားတစ်ခုလို့ ထင်ခဲ့မိသလို လူတန်းစားသတ်မှတ်ထားတဲ့ ပြည့်စုံသူတွေသာလုပ်တဲ့အလုပ်လို့ ထင်ခဲ့မိပါတယ်။ ဒီသင်တန်းတက်လိုက်မှပဲ ရှင်းလင်းစွာ သိလိုက်ရတာပါ။ သင်တန်းမတက်ခင်က သင်တန်းကြေးကို များတယ်ထင်ခဲ့မိပါတယ်။ စတက်တဲ့နေ့ အခန်းထဲဝင်လိုက်တဲ့အချိန် အခန်းရဲ့ပြင်ဆင်မူကို မြင်လိုက်ကတည်းက woo!... ဒီပုံဆန်ဆို မဆိုးဘူးဆိုပြီး အမှတ်ပေးလိုက်ပါတယ်။ စတင်သင်ကြားတဲ့အချိန်မှာ လူတစ်ယောက်ချင်းဆီရဲ့ မရှင်းလင်းတာမှန်သမျှကို စေတနာထားပြီး ရှင်းလင်းအောင်သင်ပြပေးနိူင်တာတွေ့ရပါတယ်။ ကူညီသင်ပြပေးတဲ့ အကူဆရာတွေကလဲ ဖော်ရွှေကြသလို တာဝန်ကျေကြပါတယ်။ စီမံခန့်ခွဲမူတွေလဲ အရမ်းကို စေ့စပ်တော့...သင်တန်းသားတွေတွက် စိတ်အနှောက်ယှက် ကင်းစွာသင်ကြားခွင့်ရပါတယ်ခဗျ" အသက်ရွယ် ကျား/မ မရွေး အတန်းပညာမရွေး အတွေ့ကြုံမလို လူတန်းစားမျိူးစုံ တက်ရောက်သင့်တဲ့သင်တန်းတစ်ခုလို့ ခံယူပါတယ်။ လုံးဝကိုတက်ရောက်သင့်တဲ့ သင်တန်းတစ်ခုဖြစ်ကြောင်း ရဲရဲကြီးအာမခံရဲပါတယ်။ အခြားမတက်ဖူးသေးတဲ့ မိတ်ဆွေများကိုလဲ တက်ရောက်သင့်ကြောင်း အကြံပြုပါရစေ။ ဘာ့ကြောင့် တက်ရောက်သင့်လဲဆိုတဲ့ အချက်လေးတွေကို ကျွန်တော်ခံယူထားသလောက် မျှဝေပါရစေ.... လက်ရှိလုပ်နေတဲ့ အလုပ်နဲ့တွဲပြီး လုပ်လို့ရ ရတဲ့အလုပ်ဖြစ်တာရယ်...တစ်ရက်ကို မနက်တစ်နာရီ ညတစ်နာရီအချိန်ပေး လုပ်ရုံနဲ့ တစ်ဖက်တစ်လှမ်းက ဝင်ငွေရရှိနိူင်လို့ပါ။ ဆရာသင်ကြားပေးတဲ့ အတိုင်း စည်းကမ်းတကျ သင်ယူလေ့ကျင့် လက်တွေ့သာလုပ်ပါ သေချာပေါက် အကျိူးရလဒ်တွေရမယ်လို့ ယုံကြည်ပါတယ်ဗျာ။ သင်တန်းရက်ပြီးသွားပေမဲ့လဲ အဝေးကနေ သင်ကြားပေးတဲ့ online သင်ကြားမူ့တွေလဲရှိတော့ ကျွန်တော်တို့တွက် လုံးဝအဆင်ပြေပါတယ်။ အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်..... Ye zaw shine ကချင်ပြည်နယ် မြစ်ကြီးနား
Ye Zaw Shane Self Employed
Forex Trading ပညာရပ်ကို အခြေခံနည်းပညာကစလို့ စတနာ အပြည့်နဲ့သင်ကြားပေးတဲ့ဆရာ့ ကို ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်။
Shwe Hla Thazin Thin United Pharmar
forex tradingနဲ့ပတ်သတ်ပြီး တကယ်ကောင်းတဲ့သင်တန်းလေးပါ နည်းစနစ်ကျကျနဲ့လွယ်လွယ်ကူကူ သင်ကြားပေးတဲ့အတွက် အရမ်းကိုသဘောကျမိပါတယ်
အရမ်းကောင်းတဲ့ သင်တန်းပါ။ Forex နဲ့ Gold ကို Trade မယ်ဆိုရင် စနစ်တကျ မသင်ယူထားဘဲ လုပ်ရင် အရှုံးဘက်ကို ဦးတည်နေမှာဖြစ်ပါတယ်။ ဒီသင်တန်းကို တက်ခဲ့ရင်တော့ သင်ဟာ professional trader တစ်ယောက်အဖြစ် ရပ်တည် နိုင်လာပါလိမ့်မယ်။
Phyo Tayza Student
ဆရာ့ရဲ့ သင်တန်းသားတွေကို စနစ်တကျသင်ကြားမှု စိတ်ရှည်စွာ ရှင်းပြမှုတွေကြောင့် Forex Trading ဆိုတာ အစိမ်းသက်သက်ဖြစ်နေသူတောင် အရမ်းနားလည်ခဲ့ရပါတယ် ကျေးဇူးပါ Sir Thant
Win Myat Thandar Phyo Student
Forex ကိုစိတ်ဝင်စားပြီးလုပ်မယ်လို့ဆုံးဖြတ်ပြီးရင်ဘာမှမသိရင်Sonic Generation Basic + Pro သင်တန်းမျိုးကိုတက်သည်။ Tradeတစ်ခုကိုအရိုးရှင်းဆုံးဥပမာတွေနည်းလမ်းသင်ကြားပေးသည် တကယ်ကိုအကျိုးရှိတဲသင်တန်းလေးပါ။
Win Myat Thandar Phyo Self Employed
စေတနာအပြည့်နဲ့ အသေအချာ သင်ပေးတာကြောင့် မရေမရာ အဖြစ်မျိုးတွေနဲ့ ဝေးခဲ့ရပါတယ်.... Simple strategies Comprehensive topics covered Great post- training mentoring
Zar Ni Thaung Doctor
အရမ်းကောင်းတဲ့သင်တန်းတစ်ခု လို့ဘဲပြောချင်ပါတယ် Forex လောကထဲဝင်ချင်တဲ့မိတ်ဆွေ တွေအတွက်အကောင်းဆုံးအပြည့်စုံ ဆုံးသင်တန်းတစ်ခုပါ
Chit Nyunt Self Employed
Aung Thu We Lin Business Owner
Forexလောကထဲဝင်မယ်ဆိုလျှင် မဖြစ်မနေတတ်သင့်တဲ့ သင်တန်းလေးတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ သင်တန်းဖွင့်ထားတဲ့ ရည်ရွယ်ချက်ကလဲကောင်းပါတယ်။စာတွေ့အပြင် လက်တွေ့ပါ သင်ကြားပေးတဲ့အတွက် နားမလည်တဲ့သူတွေအတွက်ဆို ပိုအဆင်ပြေပါတယ်။တစ်ဦးချင်းကိုလဲ စိတ်ရှည်ရှည်နဲ့မေးသမျှကိုလဲ ရှင်းပြပေးပါတယ်။သင်အောင်မြင်ချင်တယ်ဆို ဒီလိုသင်တန်းမျိုးကိုတတ်ဖ်ု့မမေ့ပါနဲ့😊👍
Nyan Aung Company Staff
ရိုးရှင်းပြီး စေတနာအပြည့်အဝနဲ့ သင်ပြပေးတဲ့သင်တန်းပါ forex trading ကိုစပီးလေ့လာမယ်ဆို sonic generation ဟာအသင့်တော်ဆုံး သင်တန်းပါ
Aung Aung San Technician
သင်တန်းက Forex စလေ့လာမဲ့သူတွေအတွက်တကယ်ကိုအဆင်ပြေပါတယ် အရိုးရှင်းဆုံးဥပမာတွေ နည်းလမ်းတွေနဲ့ စည်းစနစ်တကျ Trade တခုကိုကောင်းကောင်းအဝင်အထွက်လုပ်နိုင်ဖို့ အဆင်ပြေစေမဲ့သင်တန်းလေးပါ။
Xtoon Lin IT
ရိုးရှင်းတယ်သင်ကြားမှုဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်နာလည်လွယ်ပါတယ် The best place to learn forex in here.
It isanice place to start learning for forex market !! It also give strategy to help beginners to enter market with minimum risks
Kyaw San Win Doctor
I think this class is convenient for people who do not know anything for the first time to learn. And the teacher who taught me becomesaprofessional trader and it is easy to understand that we tell us. So, my opinion is that if you do not know anything properly and you do your best and learn, you will becomeaprofessional trader.
Lwin Phyo Htoo Yuki Shushi Owner
Sonic Generation ရဲ႕ Trading Strategy တွေကိုမြန်မြန်လေ့လာသင်ယူနိုင်လေလေ သင့်အတွက်မြန်မြန်အကျိုးရှိလေလေဖြစ်မှာပါ။သင် forex ဝကာင်္ပါထဲကနေ sonic ရဲ့ road map နဲ့ ပန်းတိုင်ကို အရောက်လှမ်းနိုင်ပါစေ။
Kyaw Gyi Eden Self Employed
5***** Strategy တွေက ရိုးရှင်းတယ် Trade setup တခုဝင်မယ်ဆိုရင် အဘက်ဘက်ကနေ confirmation လုပ်ပီးမှ ဝင်ရမှာ ဖြစ်တဲ့ အတွက် အမှားနဲမယ် လို့ယူဆတယ် ကိုယ့်ကိုယ်ကို forex နဲ့ ပတ်သတ်ပီး ဘယ်လိုစည်းကမ်းထားရမလဲ ဘယ်လို confident တည်ဆောက်ရမလဲ ဆိုတာတွေပါပြောပြတယ် Professional course မှာ တကယ် professional ကျကျ သင်ပေးတယ် တခါတတ်ပီးရင် နောက် သင်တန်းတိုင်းမှာလဲ fees ထပ်ပေးစရာမလိုပဲ energize ပြန်လုပ်လို့ရတယ် လိုအပ်ရင် coach ပါ လုပ်ပေးတယ် သင်ပေးတဲ့ ဆရာကလဲ စိတ်ရှည် သဘောကောင်းတယ် I like SG , I recommend SG , Thanks Ko Thant
Hnin Wai Wai Doctor
ဒီမားကက်နဲ့ပတ်သက်ပီးကိုယ့်ကိုတယ် coach လုပ်ပေးနိုင်သူတကယ်ကိုလိုအပ်ပါတယ် ခုတော့ရှာတွေ့ပီ sonic နဲ့တွေ့မှကိုယ့်ကိုယုံကြည်ချက်တွေစိတ်ဓါတ်ခွန်အားတွေပိုရှိလာပါတယ် စေတနာမေတ္တာအပြည့်သင်ကြားပေးတဲ့ sonic generation ဒီထက်မကအောင်မြင်ပါစေ ...professional ကိုဆက်ဖို့ကြို းစားရင်း thank you so much Ko Thant..
Yoon Wadi Aung Self Employed
ပထမဦးစွာ ဆရာ ကိုသန့်ကို ကျေးဇူးအရမ်းတင်ပါတယ် ဆရာရဲ့ သင်ကြားမှုကြောင့် Forex market အကြောင်းကို သေသေချာချာ ရှင်းရှင်းလင်းလင်း တိကျစွာသိမြင် ရခဲ့ပါတယ်။ ဆရာရဲ့ စေတနာကြောင့် သင်တန်းသားအားလုံး millions traders များ ဖြစ်ကျပါစေ။ ​ေလးစာလ်က္​ပါ ဆရာ ကိုသန္​႔❤❤❤❤
Tafukike Notokichi Kigachiji Self Employed
Basic++ သင်တန်းမှာ ကိုယ်ပိုင်အတွေးအမြင်ရှိအောင်,အရှုံး အမြတ်ကိုသေချာတွေးနိုင်အောင်, သင်ကြားပေးတဲ့ နေရာမှာ စေတနာပါလှပါတယ်
Tin Phyo Aung Self Employed
ပညာအပြင်စေတနာပါမြင်မိပါတယ်ဆရာ! ဆရာကို ဂါရဝျပဳ ေလးစားလ်က္ပါ
Nandar Tun Self Employed
ကိုယ်လိုအစိမ်းသက်သက်လူတွေကို နားလည်အောင် သင်ပေးလို့ တကယ်အကျိုးရှိခဲ့တဲ့ သင်တန်းလေးပါခင်ဗျာ👍 အသစ်ကစသင်ယူလေ့လာချင်သူများတက်ရောက်သင့်ပါတယ်ခင်ဗျာ
Htoo Kar Business Owner
Forex ဆိုတာကို စိတ်ဝင်စားလို့ Feedback ကောင်းတဲ့ ဒီသင်တန်းကို ရွေးချယ်မိတယ်။ ကိုယ်မျှော်လင့်ထားတာထက်ပိုပြီး စိတ်ကျေနပ်မှုကို ရရှိတယ်။ Forex ဆိုတာ လောင်းကစားလုံးဝမဟုတ် ခိုင်မာသော စီးပွားရေးတစ်ခုဆိုတာ ကောင်းကောင်းသိခဲ့ရတယ်။ Professional Course ကို ဆက်တက်ချင်ပေမဲ့ အခြေအနေမပေးသေးလို့ အောင့်ထားရဦးမယ်။
Zin Ko Ko Company Staff
ပညာရပ်တွေကိုစိတ်ဝင်စားတာကြောင့် basic တန်းကိုတက်ခဲ့ပါတယ်။ စိတ်ဝင်းစားပါတယ်။ ဒီထက်ပိုပြီးလဲ သင်ယူချင်ပါသေးတယ်။ မသင်ယူသင်တဲ့ပညာဆိုတာမရှိဘဲ အသုံးမချသင့်တဲ့ ပညာသာရှိတယ်လို့ မှတ်သားဖူးပါတယ်။ forexပညာရပ်တွေကတော့ သေချာသင်ယူသင့်သလို သေချာလဲ အသုံးချရမဲ့ ပညာပါပဲ။ ဒီထက်ပိုပြီး လူတွေကို ကူညီပေးနိုင်ပါစေလို့ ဆုတောင်းပေးပါတယ်။
ဒီသင်တန်းကိုတက်လိုက်ရတဲ့အတွက် မသိသေးတဲ့ Forex marketအကြောင်းတွေ ပြီးတော့နည်းလမ်းကောင်းတွေ ရရှိခဲ့ပါတယ် စိတ်ရှည်ပီးသဘောလည်းကောင်းသင်ကြားမှုလည်းကောင်းတဲ့ဆရာနဲ့ သင်ခဲ့ရလို့ ဒီသင်တန်းဟာကိုယ့်အတွက်အရမ်းအကျိုးရှိခဲ့ပါတယ်
Bi Bi Hug Self Employed
မသိတဲ့အပိုင်းတွေ တော်တော်များများကို သင်တန်းတက်ပြီးမှသိလာရလို့ကျေးဇူးပါ
Wai Phyo Kyaw Self Employed
လက်ရှိအလုပ်နှင့် တခြားစီပွားရေးတစ်ခုတွဲလုပ်ချင်သူများအတွက်တက်သင့်တဲ့ သင်တန်းတစ်ခုပါ။ တတ်ကျွမ်းနားလည်ပြီး သဘောကောင်းတဲ့ ဆရာတွေက စာတွေ့လက်တွေ့ ဆောင်ရန် ရှောင်ရန် များကိုပါ သင်ပေးတော့ ပြည့်စုံမူရှိတဲ့ သင်တန်းလို့ ပြောပြပေးချင်ပါသည်။ ဒီထက်မက အောင်မြင်ပါစေ sonic ရေ.…
Yan Shin Ko Software Engineer
Forex Trading ကို စတင်လုပ်ကိုင်မယ်ဆိုရင် ဒီသင်တန်းကို မဖြစ်မနေတက်သင့်ပါတယ်ရှင့်။ ဆရာတွေက နည်းမှန် လမ်းမှန်နဲ့ trade အောင်သင်ကြားပေးတဲ့အတွက် အရှုံးနည်းပြီး အမြတ်များများရနိုင်ပါတယ်ရှင့်။
Aye Myitzu Software Developer
Forex လောကထဲ ဝင်တော့မယ်ဆို ဒီသင်တန်းကို မဖြစ်မနေတတ်သင့်ပါတယ်။ ဆရာကိုသန့် ရှင်းပြတာ အရမ်းကောင်းပြီး Trading အတွက် မရှိမဖြစ်လိုအပ်တဲ့ psychology တွေရယ် စည်းကမ်းတွေ ကို စနစ်တကျ သင်ပေးပါတယ်။
Khant Thu Aung Student
Forex နဲ့ ပက်သက်ပီး အစိမ်းသက်သက်ပါ။ ဆရာကိုသန့် စိတ်ရှည်ရှည်နဲ့ သေချာ ရှင်းပြပေးပါတယ်။ ရေရှည် coach အနေနဲ့ပါ လက်တွဲ ခံယူသင့်ပါတယ်။
Myo Myint Aung Student
Forex လောကအတွက် တကယ်အကျိုးရှိစေတဲ့ သင်တန်းပါ သင်ပေးတဲ့ အကိုတွေက တကယ်တတ်ပြီး တကယ်လဲ လက်တွေ့လုပ်ဆောင်နေကြတဲ့သူတွေဖြစ်တဲ့အတွက် အတွေ့အကြုံတွေလဲအများကြီး ရှင်းပြနိုင်တယ် အစကနေ စပြီး technical analysis တွေရော သေချာသင်ပေးပါတယ် သင်တန်းတက်ပြီး trade နေတာ ၁ လ ပြည့်တော့ပါမယ် winning percentage က 1:2 မကတော့ဘူး တကယ်တက်ပြီး တကယ်လိုက်လုပ်ရင် အတော်အကျိုးရှိစေပါတယ်
Albert Winston Business Lecturer
အကောင်းဆုံးရွေးချယ်မှု့တစ်ခုလို့အရင်ဆုံးပြောချင်ပါတယ် Sonicမှာက အကောင်းဆုံးသင်ကြားရေးစနစ်ရှိတယ် စိတ်ရှည်လက်ရှည်ပြောပြသင်ပြပေးတယ် ကျွန်တော်ဆို ဘာမှမသိတဲ့ အခြေအနေ တစ်ခုကနေ အခုဆို အကောင်းဆုံူမဟုတ်ရင်တောင် အမှားကင်းကင်းနဲ့ လုပ်နိုင်နေပါပြီ sonicရဲ့ရည်ရွယ်ချက်လုပ်ဆောင်ချက်တွေက အရမ်းကောင်းမွန်ပါတယ် ဒါကြောင့်မိတ်ဆွေတွေကိုလည်း အကြံပြုပေးတာပါ
SawOo Myo Self Employed
ကျွန်တော်တို့တွေ forex ကို ကိုယ့်ဘာသာလေ့လာတာက အချိန်တွေကုန်ပြီး သိတဲ့အဆင့်လောက်ပဲရှိတာပါ ဒီသင်တန်းမှာက တတ်တဲ့အဆင့်ထိ စိတ်ရှည်ရှည် သင်ကြားပေးတယ် ကိုယ်ရဲ့အမြင်တွေကိုလဲ သေချာနားထောင်ပေးပြီး လိုအပ်ချက်တွေကိုလဲ သေချာသင်ကြားပေးပါတယ် sonic generation သင်တန်းကို တတ်ရတာက ကျွန်တော်အတွက် အရမ်းကို အကျိုးရှိလှပါတယ်ခဗျာ
Zaw Myo Aung Student
Forex trade လုပ်တော့မယ်ဆိုရင် လမ်းကြောင်းမှန်ဖို့လိုတယ်။ sonic generation ဖွင့်ပေးထားတဲ့ သင်တန်းဟာ အရမ်းကေင်းပါတယ်။ ဆရာသင်တာလဲ အရမ်းကောင်းတယ်။ စေတနာ အပြည့်ဝ နဲ့ စိတ်ရှည်စွာ နဲ့ Fx beginner သမားအတွက် တက်သင့်တယ်
Tan Fa Self Employed
FOREX Market အကြောင်းကိုအခြေခံကနေစပြီး လေ့လာချင်လို့ဘဲဖြစ်ဖြစ် အခြေခံသဘောတရားတွေကိုတီးမိခေါက်မိတော့သိပြီး စနစ်တကျနားမလည်သေးဘူးဆိုရင်တော့ Sonic Generation ကိုသာတတ်လိုက်ပါ သင်ကြားပေးတာတွေက ရိုးရိုးရှင်းရှင်းနဲ့နားလည်လွယ်အောင်သင်ပေးပါတယ် ဆရာကလည်းစိတ်ရှည်သဘောကောင်းပါတယ် Trader တစ်ယောက်ရဲ့ အတွေးအမြင်များနဲ့ သင်ကြားပေးတာဖြစ်ပါတယ်
Kyaw Kyaw Lynn Receptionist at HOTEL ICELAND
သင်တန်းက ဆရာကိုသန့် ကိုလွင်မိုးထူး တို့ရဲ့ ရှင်းလင်းတဲ့ ပို့ချချက်တွေက forex trading ကိုဘာမှမသိသေးတဲ့ ကျွန်တော့်အတွက်တောင် နားလည်လွယ်စေပါတယ် သင်တန်းပြီးသွားလဲ ကို့ analysis တွေကိုအချင်းချင်း ထောက်ပြဆွေးနွေးလို့ရတဲ့ forex trader အစုအဖွဲ့လေး ရသွားမှာ ဖြစ်တဲ့ အချက်နဲ့တင် ဒီသင်တန်းကိုတက်ရောက်ဖို့ အကြံပြုပါရစေ
Akar Chit Swe Business Owner
သင်တန်းအပ်ခဲ့တာကတော့ Professional course အတွက်ပါ ဒါပေမယ့် သင်တန်းဆရာလမ်းညွှန်မှု့နဲ့ Basic ကနေပြန်လည်တက်ရောက်သင်ကြားခဲ့ပါတယ် ပေးရတဲ့သင်တန်းကြေးထက် ပြန်ရလိုက်တဲ့ ပညာကအများကြီးတန်ဖိုးရှိပါတယ် ကိုယ်သိထား ကိုယ်လုပ်နေတဲ့ အမှားတွေကို ဝေဖန်ထောက်ပြအကြံပြုဆွေးနွေးချက်တွေက အောင်မြင်မှု့ လမ်းကြောင်းတစ်ခုပေါ်ရောက်စေမယ့် လမ်းအမှန်ကိုတွေ့ရှိခဲ့ပါတယ် စိတ်ရှည်လက်ရှည်နဲ့ လက်တွဲခေါ်ယူ သင်ကြားပေးတဲ့ ဆရာ ကိုသန့်၊ ကိုလွင်မိုးထူး တို့ကို ကျေးဇူးတင်ပါတယ်
Aung Pyae Sone Oo Company Staff
Forexကိုစိတ်﻿ဝင်﻿စားလို့လုပ်﻿မယ်﻿ဆိုSonic generation ကိုတက်﻿သင်﻿့ပါတယ်﻿.Basicမသိလဲဆရာနှစ်﻿﻿ယောက်﻿ရဲ့အသင်﻿ပြ﻿ကောင်﻿းမွန်﻿မှု﻿တွေ﻿ကြောင်﻿့﻿အဆင်﻿﻿ပြေခဲ့ပါတယ်﻿.ဆရာတို့ရဲ့အ﻿တွေ့အကြုံ﻿တွေ﻿ကိုလဲ﻿ပြောပြ﻿ပေးတဲ့အတွက်﻿အထူးအဆင်﻿﻿ပြေပါတယ်﻿.စာ﻿ဆွေး﻿နွေး﻿မေးမြန်﻿ဖို့အတွက်﻿facebook massenger group﻿လေး﻿တွေရှိတဲ့အတွက်﻿လဲအရမ်﻿းအဆင်﻿﻿ပြေတယ်﻿လို့ထင်﻿ပါတယ်﻿.သင်﻿းတန်﻿းတက်﻿ခွင်﻿့ရလို့ဂုဏ်﻿ယူမိပါတယ်﻿.
Chan Nyein Student
Forex trading ကိုစည်းစနစ်တကျနည်းလမ်းမှန်မှန် နဲ့ရှေ့ကိုချီတက်လို့ရအောင်သင်ကြားပေးတဲ့sonic generation ကဆရာတို့ကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်
Yin Mon Accountant
ကော်မရှင် အတွက် အလုပ်လုပ်နေတဲ့ Companyတွေကြားထဲမှာ တမူထူးခြား စွာ စေတနာ မေတ္တာ အရင်းခံပြီး တိုတောင်းလှသော ရက်လေးအတွင်းမှာ Forex Trading အကြောင်းကို ပွင့်လင်းမြင်သာစွာ ရှင်းပြပေး ရုံသာမကဘဲ သင်တန်းသား ကိုယ်တိုင် ယုံကြည် မှုရှိရှိ အရှုံးမရှိအောင် trade နိုင်တဲ့အထိ သင်ပေးတဲ့အတွက် ကျေးဇူးပါ #Sonic-Generation — with Ko Thant.
Kyaw Zay Ya Software Engineer
Forex Trading ကအရမ်းစိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းပါတယ်။ ဆရာကလည်းစိတ်ရှည်ပြီးနားလည်အောင်သေချာရှင်းပြတဲ့အတွက်အထူးကျေးဇူးတင်ပါတယ်။
Thandar Win Chief Accountant
တကယ်ကောင်းတဲ့ သင်တန်းပါ ဆရာ နှစ်ယောက်လုံးကိုလည်း ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်
Wai Phyo Self Employed
I recommand this class if you are having trouble with emotional difficulties and needs discipline while trading. If you areabeginner and don't have proper trading system, it should beafirst stepping stone for your future trading career. Cheers
Ko Lin Self Employed
ကျတော် tradeတာတော်တော်ကြာပါပီ နည်းစနစ်မကျ စိတ်အထင်နဲ့ပဲ tradeတာများပါတယ် ဒီသင်တန်းတက်လိုက်တော့မှ trading systemတခုကို ဘလိုလုပ်ရမလဲ သိလာတာပါ နည်းစနစ်မှန်မှန်နဲ့ traderကောင်းတယောက်ဖြစ်လာအောင် အထောက်အပံ့ပေးနိုင်မဲ့သင်တန်းတခုပါ
Xiao Lone Student
အခြေခံမရှိသေးသူများအားလုံးတက်သင့်တဲ့သင်တန်းပါ.အခြေခံမှစ၍အသေးစိတ်သင်ပေးရုံမကဆောင်ရန်ရှောင်ရန်အချက်များ.ထားရှိရမည်စိတ်နေစိတ်ထားများနှင့်အတူလေးကျင့်နည်းများကိုစေတနာထားပြီးသင်ကြားပေးတဲ့ဆရာကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်.Sorry for my late review.
Yin Min Aye United Pharmar
Basic knowledge မရှိတဲ.သူတွေအတွက်နားလည်အောင်သင်ပြပေးနိင်တဲ.အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ် စိတ်ရှည်လက်ရှည်နဲ.လက်တွဲခေါ်ပေးလို.အတိုင်းမသိဝမ်းသာပါတယ်
Ohnmar Myint United Pharmar
အရင်က သိခဲ့တဲ့အရာတွေက မပြည့်စုံပေမဲ့ခုလိုသင်တန်းလေးနဲ့ စနစ်တကျ ဘယ်လိုအမြတ်ကျန်အောင် လုပ်ရမယ်ဆိုတာကိုသိရတဲ့အတွက် တကယ်ကို အကျိုးရှိတဲ့သင်တန်းလေးပါ.မသိတာရှိရင်လဲ လွတ်လပ်စွာမေးလို့ရတဲ့တွက်.ကိုယ်နားမလည်ဖြစ်မှာကို.မပူရတော့ပါဘူး. ☺☺
Saw Steven Self Employed
သင်တန်းပြီးသွားတဲ့ အချိန်ထိ နောက်ပိုင်း Keep in Touch ဖြစ်ပေးတာကို ပိုသဘောကျပါတယ်
Kaung Set Naing Doctor
စိတ်ဝင်စားတာပဲရှိတာ ဆရာရဲ့သင်ပြမှုကြောင့် forex ရဲ့ စည်းမျည်းတွေနဲ့ ဗျူဟာတွေ ရေရှည်သွားဖို့နည်းလမ်းတွေကြောင့် forex တင်မကပါဘူး အပြင်တခြားစီးပွားရေးမှာလည်း အသုံးချနိုင်တဲ့ အတွက် ဆရာကိုကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်။ပြောစရာတွေကအများကြီးရှိပါတယ် ကိုယ်တိုင်လည်းသွားရောက်တတ်ကြည့်ပါ။ forex ကိုအခြေခံကစပြီး ဘီလျံနာကုန်သည်ဖြစ်ဖို့၊အရှုံးနည်းပြီး အမြတ်မျာများရစေဖို့အတွက် sonic က ဆရာဆီမှာသေချာလေ့လာသင်ယူဆွေးနွေးသင့်ပါတယ်လို့ထင်ပါတယ်။
Ye Htet Swan Swam Company Staff